PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-01 - Ugxothelweni uThobeka Buswana we-trufm?
Ugxothelweni uThobeka Buswana we-trufm?
Isolezwe lesiXhosa - 2018-11-01 - IINDABA - SITHANDIWE VELAPHI
EZONA zizathu zokugxothwa komanejala wesikhululo sosasazo seSABC i-trufm, uThobeka Buswana, iseyindaba yakwamkhozi, kodwa imithombo ethembekileyo yeli jelo ithele thsuphe I’solezwe ngowona mongo wokugxothwa kweli nenekazi.
Nangona nje isithethi seSABC uNeo Momodu sithe asizukuyithi pa-ha eyokugxothwa kukaBuswana, imithombo ethembekileyo e-trufm ixelele I’solezwe ukuba uBuswana ugxothelwe “ukwenza into ethandwa nguye esitishini nangokungalandeli migaqo emiselweyo.”
UMomodu uthe: “SiyiSABC singathanda ukungqina ukuba uThobeka Buswana ne-trufm bagqibe kwelokuqhawukana. Kodwa singathanda ukuba singadizi ezona zizathu ezikhokelele ekuphelisweni kwesivumelwano noNkzn. Buswana, ingakumbi xa siqwalasele ukuhlonitshwa kwesivumelwano phakathi [kukaBuswana ne-trufm].”
UMomodu uqinisekise abaphulaphuli be-trufm ngelithi oomanejala besi sikhululo benze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba isikhululo siyaqhuba nomsebenzi waso.
Ibingacaci ncakasana eyona nto agxothelwe yona uBuswana, kodwa iqela lemithombo ethembekileyo kwesi sikhululo lixelele I’solezwe ukuba oku kunokwenza nombandela wokulawulwa kwesikhululo. Abanye bathi oku kunento yokwenza nokulawulwa kweemali zesikhululo.
Ethetha kuFacebook wakhe kule veki, uBuswana uthe: “Inyaniso imile okokuba, ngamanye amaxesha, abantu mabashiye indawo ukuvulela iimbono ezintsha nobuchule obutsha. Ingayingxaki xa [abantu] benokuhlala unaphakade kumashishini ezobugcisa.”
Kodwa kwenye imbalelwano, uBuswana uvakele esithi: “Maz’bethunana, andikho strongo avani, kodwa ndinesakhono kwaye [ndingumntu] osebenza nzima. Ndiyangcangcazela ngoku ndilapha ndixhaswe nje sisandla sikaThixo.”
UBuswana ukwabulele iSABC ngokumnika ithuba lokukhokela esi sikhululo esithi: “Besiliqela elikholelwa kulutsha lwaseMpuma Koloni kwaye sisebenze nzima ukunqwabulula nokuqeqesha [italente] yeli phondo. Ndiyayibulela iSABC ngeli thuba. Ndakuhlala ndimkhumbula uNada Wotshela. Wabona into [kum] ngethuba kwakungekho kwanto enokubonwa.
“Ngoku siqala uqalo olutsha lokuqhubeka nomsebenzi. Namhlanje [ngoLwesibini] siqala iThobeka Buswana Training Specialists,” utshilo uBuswana kuFacebook wakhe.
Ukanti uBuswana ukwanayo neThobeka Buswana School for Girls apho aqeqesha khona amantombazanana ngeendlela zokuziphatha.
UMFANEKISO: MPUMELELO MATWA
Umfundisi uTimothy Omotoso kwinkundla ephakamileyo yamatyala, eBhayi